वीरगंज पढ्नेहरु कसरी पुगे रक्सौल ?
वीरगंज पढ्नेहरु कसरी पुगे रक्सौल ?
कोठामा भेटियो सुसाइड नोट
२०७५ माघ २८ सोमबार १२:४०:००
अनिल पोखरेल, टिभी अन्नपूर्ण राजविराज ।
आइतवार बिहान वीरगंजको सीमावर्ती कंगली फाटक नजिक दुई जना नेपाली छात्राको शव भेटियो । रक्सौल रेल्वे स्टेसनबाट २ किलोमिटर पश्चिम–दक्षिणमा पर्ने फाटकमा रेलको चक्काबाट किचिएर दुबैको ज्यान गएको हो । मृत्यु हुनेमा पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका वडा नं २ भेडिहारीकी १८ वर्षीय निभाकुमारी साह र सोही गाउँपालिका वडा नं ३ हरिहरपुरकी सोही उमेरकी किरण कुमारी चौरसिया हुन् । रक्सौलबाट दिल्ली जाँदै गरेको १५२७३ नम्बरको सत्याग्रह एक्सप्रेस रेलले उनीहरुलाई किचेको थियो । केही मिटर वरपर रहेका दुबै शवको अंगहरु छिनेको अवस्थामा भेटिएका थिए ।
रेलले एकजनाको टाउको छिनाएको थियो भने अर्कीको खुट्टा चुँडाएको थियो ।
उनीहरुको शव भेटिएपछि केही अनुत्तरित प्रश्नहरु उब्जिए । वीरगञ्जका किशोरीहरु सीमावर्ती भारतको रेल फाटकमा कसरी पुगे ? उनीहरुको मृत्यु स्वभाविक थियो वा अस्वभाविक ! हत्या हो वा आत्महत्या ! माथिका प्रश्नको जवाफमा दुबै देशका प्रहरीको एक मत छ । उनीहरुको हत्या होइन आत्महत्या नै हो । तर अझैं एटा प्रश्न भने अनुत्तरित नै छ । आखिर किन आत्महत्या गरे त ?
दुबै जना वीरगंजस्थित वीरगंज पब्लिक सेकेन्डरी स्कुल (बिपिसी क्याम्पस) मा वाणिज्य संकायतर्फ कक्षा ११ मा अध्ययनरत थिए। रेल्वे पुलिसले उनीहरुबाट प्राप्त परिचय पत्रको अधारमा पहिचान खुलाएको रक्सौल थानाका इन्सपेक्टर अजय कुमारले बताए।
दुई नेपाली किशोरीको कोठाबाट प्रहरीले ‘सुसाइड नोट’ फेला पारेको छ । घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी टोलीले छात्राहरु बस्दै आएको वीरगञ्ज रानीघाटस्थित कोठा फोरेर हेर्दा ‘संयुक्त सुसाइड नोट’ फेला पारेको हो । प्रहरीका अनुसार रातो कलमले लेखिएको सुसाइड नोटमा उनीहरुले कसैमाथि कुनै पनि किसिमको आरोप लगाएका छैनन् ।
कक्षा ११ मा पढ्ने किरण चौरसियाको विवाहका लागि भर्खरै फूलमाला भएको थियो । कोठामा भेटिएको ‘सुसाईट नोट’ माथि किरणले इन्गेजमेन्टमा पाएको घडी र प्लाष्टिकको फूलसमेत राखेकी थिइन् । किरणको केही दिन पहिलेमात्रै विवाहको मिति समेत तय भइसकेको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका अनुसार अक्षर म्याच गराएर हेर्दा किरणकै हो भन्ने पुष्टि भएको छ ।’
सुसाइड नोटमा ‘यसमा कसैको दोष छैन, हामीले संसारमा बाँच्नुको कुनै अर्थ देखेनौं, हामीले तपाईहरुको सपना पूरा गर्न सकेनौं, आई लभ यु पापा, आई लभ यु ममी’ जस्ता कुराहरु लेखिएको प्रहरीले जानकारी दियो ।
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार डेराबाट उनीहरु आइतबार बिहान साढे ६ बजेतिर एकैसाथ निस्केका थिए ।
दुबै शवहरु पोष्टमार्टमका लागि रक्सौलमै राखिएको छ । भारतीय प्रहरीले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि शव नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा लगाउने छ ।
नेपाल र भारत दुबैतर्फका प्रहरीहरु लगभग ‘आत्महत्या’ नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुगे पनि वीरगञ्जमा बस्दै आएका किशोरीहरु अकस्मात त्यहाँ कसरी पुगे भन्नेबारे शंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ । रक्सौलबाट दुई किलोमिटर दक्षिणको गाउँमा उनीहरु किन र कसरी गए भन्नेबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
प्रहरीले यो घटनामा थप अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ ।